विवादको भूमरीमा एनआरएन अमेरिका- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
विवादको भूमरीमा एनआरएन अमेरिका
वैशाख ६, २०७४ दिनेशजंग शाह
काठमाडौं — कहिलेकाँहि मनमा जिज्ञांशा उठ्छ । उपेन्द्र महतोहरुले डेढ दशकअघि गैरआवासीय संघ (एनआरएन) को अभियान रसियाबाट थाल्दा, अहिलेको जस्तो प्रवासी नेपाली समाज, त्यहाँ भएको भए, त्यो अभियानको हविगत के हुन्थ्यो होला ?
राजनीति, भूगोल, जातको आधार विभाजित प्रवासी समाज र त्यसलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने टोले संघ, संस्थाहरुले के साँचिच्कै एनआरएनए लाई गरिखान दिन्थ्ये होला ?
कम्तीमा अहिले, अमेरिकी एनआरएनएको स्थितीलाई नियाल्दा, मेरो त्यो जिज्ञाशा धेरै हदसम्म मथ्थर हुन्छ । र एउटा निचोड निस्कन्छ‘त्यति बेला, रसियामा यदि त्यस्तो हुँदो हो त, अहिलेको भद्रगोल, त्यतिबेला भइसक्थ्यो ।’
एकथरिको तर्क छ, ‘गैरआवासीय अभियान, सशक्त र विश्वव्यापी बन्दैछ ।’ उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने र शेष घलेहरुको व्यक्तिगत सफलतालाई यदि यो अभियानसँग जोडेर हेर्ने हो भने, माथि उल्लेखतर्कमा दम छ । तर, ब्यक्ति गौण हो भन्ने संगठानिक तथ्यलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने, एनआरएनए प्रभाव खुम्चिदैं गएको मेरो बुझाई छ । यसप्रति चासो घटदो छ । विभाजित प्रवासी समाज नै यो अभियानको अस्तित्वमै ‘थ्रेट’ बनेको छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा, विदेशी भुमिमा औचित्यहिन नेपाली राजनीतिका बाछिटाले, यो गैरराजनीतिक अभियानलाई दुषित पार्दैछन । कसरी ?
तर्कहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन् ।
राजनीति आस्थाले एकथरि जमातलाई उत्तेजित पारेपनि, प्रवासको एउटा ठुलो हिस्सा, नेपालको वर्तमान राजनीतिक शैली प्रति पूर्ण असन्तुष्त मात्र होइन, औचित्यहिन प्रवासी गतिविधी प्रति विमती राख्छ । रयहि विमती,व्यवसायिक र उच्च शिक्षित वर्गलाई एनआरएन अभियानमा भित्रिन, मुख्य बाधक बन्दैछ । किनकी, राजनीतिका छिटा नपरुन्जेल, पैसा खर्चेर मतदाता (नक्कली) नबनाउन्जेल, चन्दा दिएर संघ, संगठनहरुलाई प्रभावित नपारुन्जेल, अमेरिकामा एनआरएनएको नेतृत्व हत्याउन अबअसंभव झै छ ।
राजनीतिक दल सम्बद्धहरु, एनआरएनएमा लाग्नै नहुने भन्ने होईन । राजनीतिक आस्था सबैमा हुन्छ । तर चुरो कुरो के भने, गैरराजनीतिक अभियानमा, राजनीतिको प्रभाव कसरी कुप्रभावमा रुपान्तरण हुन्छ, हामी भुक्तभोगी नै छौं । उन्नती भयो कि अवनति। आरोह हो कि अवरोह । नेपालको कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक संस्थाको हविगतले यसको पुष्टाई गर्छ । यो पृष्ठभुमिमा, राजनीतिक गुटकै आडमाएनआरएनएको नेतृत्व हत्याउदाँ, के भईरहेको छ । के हुन्छ, भन्ने पनि थाहा छ । टेक्सास हेर्नुस वा क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क होस वा बोस्टन, हरेक खाले संघ, संस्थाको नेतृत्व चयनको पक्ष आउँछ, त्यति राजनीतिको आग्रह र पुर्वाग्रह नै निर्णायक बन्छ । चाहे ती सामाजिक संस्था हुन वा पत्रकारहरुको संगठन । जब राजनीतिक बाछिटाले नेतृत्व छनोटमा प्रभाव पार्छ, ‘राम्रो भन्दा पनि आफनो’ भन्ने प्रवृती हावी हुन्छ । अनि दक्ष, अनुभवी एवम सवैले मान्ने खालेको नेतृत्वका आकांक्षीहरु पाखा लाग्छन्, अनि त्यहि झुण्ड हावी हुन्छ । केहि समयपछि नेतृत्व हत्याउन सफल गुट विरुद्व त्यस्तै प्रवृतीको उपगुट जन्मिएपछि संगठनको हविगत के हुन्छ, हामी सँग यथेष्ट उदारहणहरु छन । अमेरिकाको एनआरएनए, अहिले यहि नियतीको पहिलो चरणबाट गुज्रिदैछ ।
राजनीति आफैमा खराब होईन् तर हाम्रो अभ्यासले के संकेत गर्छ भने, यसले हाम्रोविवेकलाई बन्धक बनाईरहेको छ । नत्र, भुगोल बिनाको राजनीति, कर विनाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि सात समुद्र पार, यत्रो नौटंकी सायदै हुन्थ्यो । कार्य समितीमा झगडा हुदाँ, भुकम्प पिडित राहत रकम हिनामिना हुने, अनि मिल्दा राहत रकमको उचित व्यवस्थापन भयो भन्ने प्रचारबाजी कति विवेकसंगत छ, सबैले बुझेकै पक्ष हो । अहिले नै एनआरएनएको विभिन्न पदका धेरै आकांक्षीहरुलाई नियाल्दा पनि, सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ, आफनो दक्षता वा ब्यक्तित्वको प्रभाव भन्दा पनि, त्यहि गुट उपगुटको बुई चढेर, नयाँ जिवा लामिछानेहरुको पथमा दौडिन, उनीहरु लालायित छन । एनआरएनए, अमेरिकाको पहिलो निर्वाचनमै प्रष्टरुपमै कांग्रेस र एमाले पार्टी सम्बद्व गुट उपगुट निकट उम्मेदवारहरु आमन्ने सामने थिए । एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अगुवाले यो पंक्तिकार सँग त्यतिबेलै भनेका थिए‘ म्यानहाटनको एक होटलको कोठा बुक गरेर, फोन मार्फत अनुरोध गर्दै हजारौं मत हाम्रो पक्षमा पार्‍यौं ।’ त्यसपछिको पछिल्लो चुनाव, त्यसको पराकाष्ठ थियो । जित्ने, हार्ने र अनि मुद्वा हाल्नेहरु, गुट उपगुटका गोटीहरु थिए ।
खुल्ला समाजमा सबै मनमुटावलाई उचित व्यवस्थापन गर्न चुनावी प्रक्रिया र पद्वती बनाईएको हो । तर विभाजित प्रवासी समाजको यो पृष्ठभुमिमा एनआरएनएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया एवम चुनावी पद्धतीले मात्र यो जोखिम थेग्न सक्दैन । किनकी सबै सरोकारवालाहरु गुट उपगुटको चगुलमा छन् । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष, वर्तमान नेतृत्वले सामान्य आचरण, पारदर्शिता एवम व्यवहार प्रर्दशन गर्नै सकेन् । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले केहि हदसम्म समाजलाई विभाजित गर्छ । दल र तीनीहरुका संगठनहरु खुल्ला समाजमा आफना प्रतिस्पर्धीलाई होच्याउन, खुल्याउन जहिले पनि अग्रसर हुन्छन । यो राजनीतिको एक चरित्र हो । तर गैरराजनीतिक संगठनमा यस्तो दोहरिनु, नेतृत्व पक्ष आफै मुछिनु राम्रो संकेत होइन ।
अहिले नै चुनावी प्रक्रियाविवादित भएपछि, त्यसले दिने परिणामको स्वच्छता बारे कल्पना,एक दिवास्वप्न हो । सभ्य समाजमा पुगेर पनि नक्कली काम कारवाही मार्फत अगुवा जन्माएर केहि अर्थ राख्छ ? फर्जी सदस्यताको आडमा चुनावी परिणाम आफनो पक्षमा पारेको संगीन आरोप खेपिरहेको अमेरिकाको एनआरएनए नेतृत्वले कम्तीमा त्यो नैतिक धरातलगुमाईसकेको छ । पछिल्ला विवादका झिटाहरु, त्यसैका श्रृखलाहरु हुन । हारेपछि अदालत गुहार्ने चलनलाई परिणाम नस्वीर्काने कडीको रुपमा पनि व्याख्या सकिन्छ । तर पनि, चित्त नबुझेको बिषयमा खुल्ला समाजमा अड्डा अदालतगुहार्नु सामान्य पक्ष हो । तर के यहि प्रवासी समाजले भन्न सक्छ, एउटै क्रेडिट कार्डबाट सयौं सदस्यता बनाईने बिषय कति असामान्य बिषय हो भनेर ? यस्तो बिषयमा पनि समाज विभाजित हुनु भनेको, हाम्रो विवेक माथि नै प्रश्न उठनु हो । के हामी, सहि र गलतको परिधिलाई छुट्टाउनै नसक्ने विवशताको शिकार भएकै हौं ? दुई साल अघि भारतले नेपाल माथि नाकाबन्दी लगाउँदा समेत एकथरि बुद्विजिबीहरुले त्यो यर्थातलाई अस्वीकार गरे, जस्तो ।
नक्कली सदस्यताको सन्र्दभमा, दोषी प्रमाणित हुनु र आरोपित बन्नु दुई भिन्न पाटाहरु हुन । तर सभ्य समाजमा नेतृत्व आरोपित हुनुको अर्थ, सामान्य बिषय हुन सक्दैन । पहिलो, आरोपितहुनु, नेतृत्वको नैतिकतामा प्रश्न चिन्ह उठनु हो । नैतिक संकट देखिएपछि, नेतृत्वले सबैलाई समेटनुको साटो गुट उपगुटको नेतृत्वमा झर्छ, त्यसैमा रम्छ । दोस्रो पक्ष, आफनो अस्तित्व माथि आरोप लागेपछि, प्राय नेतृत्वमा ब्यक्तिवादी प्रवृती हावी भएर जान्छ । ब्यक्तिगत लाभ नै प्राथमिकताको विषय बनेपछि, विपक्षीहरुलाई सिध्याउनु, उस्को एकल सुत्र बन्छ । अहिलेको एनआरएन अमेरिकाको पछिल्लो स्थितीले यसैलाई प्रष्टाउँछ । नत्र, सदस्यताको बिषयमै किन यत्रो बबण्डर ? न्यायिक कमिटी र सदस्यता छानबिनमै किन खिचातानी ?बढी भन्दा बढी सदस्यता बन्नु त जुनै खाले संगठनको लागि हितकर होईन र । कम्तीका राजनीतिका छिटाहरुलाई निस्तेज नगरुन्जेल, यो हविगत जारी नै रहनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७४ १३:३४
पारिजात खोज्दै सिक्किमकी सृजना
सन्दर्भ : पारिजात स्मृति दिवस
काठमाडौं — वैशाख ५ गते मंगलबार पारिजात स्मृति दिवस मनाइएको छ । प्रगतिशील लेखकहरूले यो दिनलाई सम्झिने गर्दछन् । पारिजातको नाममा विभिन्न सम्मान प्रदान गरिन्छ । वि.सं.१९९० फागुन ३० गते जन्मिएकी पारिजातका निधन २०५० वैशाख ५ गते भएको थियो । उनले जीवनकालमा धेरै कृति दिएकी छिन्, यद्यपि सम्झिने ‘शिरिषको फूल’उपन्यासै काफी छ ।
तिनै पारिजातको कृति अनि इतिवृत्ति धेरै धेरै शोधार्थीले खोज्दै आएका छन् । त्यही पंक्तिमा सिक्किमकी सृजना शर्मा जुट्दै छिन् । वाराणसीस्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यलय (बिएचयु)बाट ‘स्त्री विमर्शका दृष्टिले पारिजातका कथा’शीर्षकमा विद्यवारिधि गर्दैछिन् । ‘भारतमा पारिजातका बारेमा भनेजति सन्दर्भ स्रोत र सामग्री पाइँदैन,’हालैमात्र राजधानी काठमाडौंस्थित साझा प्रकाशनको बिक्री कक्षमा भेटिएकी शोधार्थी शर्माले भनिन्, ‘सिक्किम, दार्जिलिङ अनि सिलिगुडीको पारिजात स्कुल पुगें । नेपालमा काठमाडौंका सबै पुस्तकालय चहारें । पारिजात स्मृति केन्द्र धाएँ । उनीबारे केही नयाँ कुरो जानकारी पाउँछु कि भन्ने लागेको छ ।’उनले सिक्किम युनिभर्सिटी, उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय (एनबीयु) चहारेको सुनाइन् । मदन पुरस्कार पुस्तकालय, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, डिल्लीरमण पुस्तकालय चहार्न भ्याएको उनले जनाइन् ।
पारिजातले कथा, उपान्यास, नाटक, कविता, निबन्ध, आत्मसंस्मरण विधामा कलम चलाइकी छन् । उनी निर्विकल्प प्रगतिशील लेखिका हुन् । कतिले पारिजात नारीवादी हुन् भनेका छन् भने कतिले होइनन् पनि भनेका छन् । ‘पारिजातलाई फरक फरक कोणबाट नियाल्ने प्रयास भइरहेको छ,’ विगत पन्ध्र वर्षदेखि पारिजातबारेमा अध्ययन गर्दै आएकी शर्मा भन्छिन्, ‘पारिजात मानवतावादी लेखिका हुन् ।’प्रोफेसर दिवाकर प्रधानको निर्देशनमा पीएचडी उपाधिका लागि शोधरत शर्माको भनाइमा विष्णुकुमारी वाइबा अर्थात् पारिजातले समाजका पीडित वर्गलाई विशेष सहानुभूति राखेर कलम चलाएको उल्लेख गर्छिन् । नारी मनस्थिति र स्थितिका साथै बाल समस्या तथा पुरुषको अहम्‌जन्य आधिपत्यलाई आफ्ना रचनामा चित्रित गरेकी उल्लेख गर्छिन् । ‘प्रगतिशील चेतनाको दृष्टले पारिजात प्रख्यात भए पनि कलात्मकताको दृष्टिले उनको अस्तित्ववादी लेखन अझ सशक्त छन्,’शर्माको निष्कर्ष छ ।
शर्मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ‘अंग्रेजी–नेपाली संक्षिप्त शब्दकोश’निर्माणमा संलग्न अध्यतासमेत हुन् । उनी आफू नेपाली भाषा र साहित्य अध्ययनमा आफ्ना गुरुहरु प्राध्यापकहरु राजेन्द्र भण्डारी, पुष्प शर्मा, घनश्याम नेपाल, मोहनप्रसाद दाहाललाई जस दिन्छन् ।
पारिजात स्मृतिमा सम्मानको घोषणा
पारिजात स्मृति केन्द्रले पारिजात स्मृति दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न स्रष्टा तथा व्यक्तित्वलाई सम्मानको घोषणा गरेको छ । जसअनुसार २०७४ सालको ‘पारिजात सृजना सम्मान’साहित्यकार हेमनाथ पौडेललाई प्रदान गरिने भएको छ । त्यसैगरी ‘पारिजात बालसाहित्य सम्मान’साहित्यकार विजय चालिसेलाई, ‘पारिजात कला सम्मान’ वरिष्ठ कलाकार तथा साहित्यकार श्याम तमोटलाई र ‘पारिजात नारी संघर्षशील सम्मान’राजनीतिज्ञ तथा अधिकारकर्मी शशी श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरेको छ । उक्त सम्मान वैशाख अन्तिम साता पारिजात स्मृति दिवसका रुपमा प्रदान गरिने केन्द्रका सदस्यसचिव स्नेह सायमिले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।